ရုရှား-တရုတ် ဆက်ဆံရေးက “မည်သူ့ကိုမှ ဆန့်ကျင်ရန် မရည်ရွယ်ကြောင်း” ရုရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပြော - Xinhua News Agency
မော်စကို၊ ဇန်နဝါရီ ၁၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ရုရှား-တရုတ် ဆက်ဆံရေးသည် “မည်သူ့ကိုမှဆန့်ကျင်ရန် ရည်ရွယ်ထားခြင်းမရှိကြောင်း” ရုရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဆာဂျီ လက်ဗ်ရော့ဗ် (Sergei Lavrov) က ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။“တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးအကြောင်းပြောရရင် ဆက်စပ်မှုတစ်ခုအပေါ် မူတည်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနောက်နိုင်ငံက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်တွေ ဘာကိုမဆိုတွေးထင်နေတာတွေရှိမှာပါ” ဟု ခရိုအေးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Gordan Grlic Radman နှင့် မော်စကိုမြို့တွင် တွေ့ဆုံပြီးနောက် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ လက်ဗ်ရော့ဗ်ကပြောကြားခဲ့သည်။
ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ လက်ဗ်ရော့ဗ်က “ရုရှား-တရုတ် ဆက်ဆံရေးက ပြိုင်ဘက်ကင်း ဗိသုကာ” ဖြစ်ကြောင်းနှင့် နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းရန်နှင့် နိုင်ငံတကာ ပြဿနာများကိုဖြေရှားရန် နှစ်နိုင်ငံ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအပေါ် ချီးကျူးပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လာမည့်လအတွင်း ရုရှားနိုင်ငံ သမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်သည် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ခရီးစဉ်အတွင်း ကဏ္ဍစုံ နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအား ဆွေးနွေးမည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြောင့် ၎င်းက ဖြည့်စွက်ဖော်ပြခဲ့သည်။ (Xinhua)
MOSCOW, Jan. 17 (Xinhua) — Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said Monday that Russia-China ties are “not directed against anyone.”
“As for our relations with China, they are not dependent onaconjuncture and are developing irrespective of what our Western colleagues think about this,” Lavrov said atapress conference following his meeting with Croatian Foreign Minister Gordan Grlic Radman in Moscow.
Duringapress conference on Friday, Lavrov praised the “unique architecture of Russia-China ties,” as well as the joint efforts of both countries to strengthen bilateral cooperation and solve international problems.”
He added that all aspects of bilateral ties and cooperation are expected to be discussed during Russian President Vladimir Putin’s upcoming visit to China next month. ■
Photo : The national flags of China and Russia are seen on Red Square, Moscow. (Xinhua)